Inoffensive Clip-art: A Hapụrụ Ndị Abụba | Martech Zone
Abụ m otu n'ime nnukwu ndị America ị gụrụ na ọnụ ọgụgụ. Taa, n'etiti ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ, echere m na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịme ụfọdụ doodling na Illustrator. Enwere m echiche maka obere egwuregwu wee gafere Microsoft Clipart iji hụ ma m ga-ahụ abụba abụba na clipart nke m nwere ike iji n'ọnọdụ m.
Nope. O yiri ka Microsoft ejirila clipart ya dozie nke ọma na ọnweghị ihe dị ka abụba… belụsọ na ị bụ onye anụ ahụ na-ele anya na enyo ngosi a. Onweghi onye buru ibu, o nweghi onye buru oke ibu… mana enyí buru ibu. (Kedụ ka ị ga - esi mara mgbe enyí buru ibu?)
Nke a bụ ihe ha nwere:
E mejọrọ m. Echeghị m na ọ dị mma na clipart anaghị anọchite anya ndị America. Ọ bụrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị okenye America niile buru ibu, mgbe ahụ echere m na ihe karịrị ọkara ndị clipart niile kwesịrị ibu ibu!
Ihe dị ka nde ndị toro eto 127 na US buru oke ibu, nde iri isii, na nde 60 buru oke ibu.
Heck, ụmụ nwoke ahụ na-acha ntutu isi nwere peeji 3 nke clipart n'ebe ahụ! Ebee ka ụmụ nwoke mara abụba nọ?! Ndị abụba n'ịdị n'otu! Anyị chọrọ abụba clipart! Kpọtụrụ Microsoft taa ma gwa ha na anyị agaghị eji ihe osise akpachapụrụ anya na-akọwa anyị!
Nov 15, 2006 na 6:15 PM
Ọ DỊ MMA. Nke ahụ bụ ọchị! Daalụ maka ịkekọrịta! Ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi (isi na ájá) clip art. Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Mee 11, 2007 na 10: 38 AM
Ma n'ihi na abụba gị apụtaghị na ụwa ndị ọzọ kwesịrị ikwekọ. Gaa nwụọ nke sodium dị elu ma ọ bụ ụfọdụ sh **
Mee 11, 2007 na 10: 50 AM
Enweghị m ọbara mgbali elu yabụ echeghị m na sodium ga-eme ya. Abụ m ezigbo nwa akwukwo maka ọrịa shuga, ọ bụ ezie! 😉